By Na Eng, Phil de la Vega
Ballanqaadkayaga Kala duwanaanshaha, Sinnaanta, iyo Ka mid noqoshada (DEI) waxay nagu wajaheysaa in aan ku cadaadino aduunka oo dhan oo loo dhan yahay oo loo siman yahay. Haddii uu qofku ku socdo xafiiskeena ama nala wadaago internetka, waxaan ku dadaalnaa inaan abuurno deegaan kaas oo qof waliba dareemo qiimo iyo ixtiraam. Taasi waa sababta aan dhawaan u eegnay shabakadayada si aan u muujinno heerarka ay gaari karaan. Waa kuwan waxa aan ka baranay.
Maxaa loola xiriiri karo Webka
Helitaanka waxaa loola jeedaa in boggaga internetka si gaar ah loogu talagalay loona xereeyay si dadka naafada ah ay u isticmaali karaan. Qiyaastii boqolkiiba 20 dadka Maraykanku leeyahay arrin la xidhiidha, iyo 30ka sano ee soo socda, tirada dadka a naafan arag waxaa la filayaa inuu laban laabo. Hagaajinta helitaanka waxay u socotaa waddo dheer si loo sii wanaajiyo gaadhista fikradaha iyo fursadaha aan dooneyno in aan la wadaagno dadweynaha.
Dadka naafada ah waxay isticmaalaan qalab kala duwan si ay u galaan shabakadaha internetka. Tusaale ahaan, dadka indhoolayaasha ah ama aragtida aragtida ah waxay sida caadiga ah u isticmaalaan akhristayaasha screen-ka, kuwaas oo ah barnaamijyada software-ka kuwaas oo bedelaya mawduuca shaashadda ku dhejinta hadalka ama farta Braille. Nidaaminta Magnification, oo soo saaraya muraayad weyn oo shaashadda korka ku jirta, waxay kor u qaadaysaa qoraalka iyo sawirrada dadka qaba aragga saboolka ah ama akhrinta dhibta. Nidaamka wax ku qorista hadalka wuxuu bixiyaa hab kale oo lagu geli karo qoraalka iyo isticmaalka kombuyuutarka loogu talagalay kuwa ku adag inuu qoro. Isticmaalayaasha barnaamijka u sheeg waxa aad rabto inaad gasho si aad u hesho sheyga menu. Waxyaabahaasi waxay ka caawiyaan dadka inay si fudud u qabsadaan hawlaha internetka.
Weydiinta Su'aalo Cusub, Qabashada Baaritaanka Maqnaanshaha
Markii aan dhowaan dib u cusbooneysiinay boggeena internetka, waxan ka dhignay qaybinta kumbuyuutarka mudnaanta koowaad ee habka baarista iyo raadinta, waxaana la raacay su'aalo ku saabsan heerarka kala duwan iyo sahlanaanta socodka inta aan dib u eegeyno. Horumarinta shabakadayada Visceral isla markiiba wanaajiyey shaqadayada raadinta iyo codeynta u hoggaansanaanta ugu dambaysay Heerarka codeynta WCAG ee A iyo AA.
Marka labaad, waxaan ku soo darnay cajalado fiidiyow ah oo ku saabsan boggayaga internetka. Fursadaha badan ee software ee la heli karo, sida Rev.com, 3play, iyo Amara sameeyey fudud this. Waxaan sidoo kale ku dari karnaa xiritaan ku saabsan fiidiyowyadeena warbaahinta bulshada waxaanan ku boorineynaa in aan isku-sameeyno. Marka la eego tirada badan ee dadka fiiriya fiidiyowyada aamusnaanta ah, waxay ku dhajiyaan qoraalka shaashadaha shaashadda shaashadda inay hubiyaan ballaarin iyo faa'iido badan qof kasta, maaha oo kaliya dadka qaba naafonimada maqalka.
"Qiyaastii boqolkiiba 20 dadka Maraykanka ah ayaa leh arrin la xidhiidha. Taasi waxay ka dhigan tahay in la hagaajin karo helitaanka waddo dheer oo la xidhiidha fidinta gaadhista fikradaha iyo fursadaha aan u fidino dad badan. "
Muujinta muuqaalku waxay u oggolaaneysaa isticmaalayaasha keyboard inay isticmaalaan furaha tabka si ay ugu dhex socdaan walxaha, sida isku xirka, badhamada, iyo foomamka foomka. Tani waxay hagaajinaysaa navigation iyo waxay ka caawisaa dadka isticmaala halka ay ku yaalaan bogga.
Ugu dambeyntii, waxaanu shaqaaleysiinay WeCo, oo ah shirkad tijaabo ah, si loo sameeyo baadhitaan buuxa oo madax-bannaan oo loo sameeyo dib-u-habeynta. Maxaa ka dhigaya WeCo gaar ah waa in dhammaan tijaabiyeyaashu ay leeyihiin naafonimada ay imtixaan u tahay, taasoo awood u siinaysa inay bixiyaan jawaab celin ku salaysan khibradooda koowaad. Shirkadaha kale waxay ku tiirsan yahiin waraaqaha ku saleysan shabakadda si ay u tijaabiyaan u hoggaansamida u hoggaansamida, habka aan ka hubin xeerarka oo laga yaabo inuu helo qaladaad been ah. Xirfadlayaasha adeegsiga ee WeCo waxay tijaabiyaan tusaale tijaabo ah bogagga shabakadda aragtida, dhaqdhaqaaqa, iyo caqabadaha garaadka iyo kadibna bixiyaan warbixin dhamaystiran. Waxay sidoo kale tilmaamayaan baahiyaha aan laga yaabo inay muuqdaan markii websiteka la dhisay oo ay bixiyaan talooyin qaas ah si ay uga caawiyaan mudnaanaha la cusbooneysiin karo.
Waa kuwan tallaabooyin la taaban karo oo aan qaadannay natiijada xisaabtan:
Hagaajinta qoraalka hoose: Akhristayaasha shaashadaha, ku daray qoraal kale (ama qoraalka hoose) nidaamka dhabarka ayaa ku siinaya sharaxaadda sawirada. Tani waxay u oggolaaneysaa dadka isticmaala naafonimada muuqaalka inay si fiican u fahmaan waxa sawirrada u eg sida goobta. Waxaan ku dari karnaa darajooyinka hoose ee sawirada aan haysanin iyo kuwa cusub ee la cusbooneysiiyey.
Bixi diiradda muuqaalka isticmaalayaasha isticmaalaha: Tani waxay u oggolaaneysaa isticmaalayaasha keyboard inay isticmaalaan furaha tabka si ay u socdaan iyada oo loo marayo walxaha xoogga saaran, sida isku xirka, badhamada, iyo foomamka foomka. Tani waxay hagaajinaysaa navigation iyo waxay ka caawisaa dadka isticmaala halka ay ku yaalaan bogga.
Tani waa tusaale ka mid ah McKnight hagaajinta qoraalka hoose ee sawirada laga isticmaalo boggayaga internetka.
Ku dar a khariidadda goobta: Khariidadda goobta ayaa ka caawin karta dadka isticmaala inay fahmaan qaab-dhismeedkaaga boggaaga, waxaad si guud u eegtaa boggaaga, oo waxaad siisaa hab sahlan oo aad u socotid goobta. Dhamaan dadka isticmaala waxay ka faa'iideysan karaan khariidadda bogga si fudud loo helo macluumaadka.
Nadiifinta qaladaadka code: Khaladaadka Code waxay sababi karaan qalab caawiya si aad u fahamto macluumaadka bogga. Qalabaynta qaladahan waxay xaqiijineysaa in isticmaalayaasha tiknoolajiyada taageerada ay heli karaan macluumaadka sida loogu talagalay.
Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan helitaanka internetka, tag WebAIM, oo bixiya hordhac weyn, oo ay ku jiraan heerarka codka ee hadda jira. Wareegga World Wide Webkuna wuxuu leeyahay a hagaha taas oo bixin karta dib-u-eegis koowaad ee helitaanka webka. Waxaa intaa dheer, Xeerka Naafada Americans wuxuu leeyahay a xirmada qalabka ugu fiican la heli karo.
Tani waa shaqo sii socota. Maaddaama McKnight uu sii wado socdaalkiisa DEI, waxaan sii wadi doonaa inaanu qiimayno sidii loo samayn lahaa isgaadhsiinta dadweynaha oo loo dhan yahay. Waxaan aqoonsanahay inaan heysano wax badan oo aan wax ku baran karno oo marwalba way fiicneyn. Tusaale ahaan, waxaan rabnaa in aan wax badan ka barano isticmaalka loo isticmaalo luqadda, sawirrada, iyo hanti-ku-saleysan; kordhinta kala duwanaanshaha shabakadayada ee wariyeyaasha freelancers; iyo sii wadaan in ay sii kordhiyaan sheekooyinka iyo waayo-aragnimada hoggaamiyeyaasha hoos yimaada iyo ururada. Waxaan rajeyneynaa in aan la wadaagno waaya-aragnimadeena, gaar ahaan markaan wax badan ka faa'iideysanay dhageysiga ku saabsan khibradaha dadka kale.
Mawduuca: Isgaadhsiinta, Sinnaanta Caadi ahaaneed iyo Ka Qayb-qaadashada